» जनतालाई घर–घरमा सिंहदरबार आएको महशुस गराउन सकेका छैनौंः वडाध्यक्ष न्यौपाने
जनतालाई घर–घरमा सिंहदरबार आएको महशुस गराउन सकेका छैनौंः वडाध्यक्ष न्यौपाने
४ चैत्र २०७५, सोमबार १७:५९
मकवानपुर । २०४१ साल असार २५ गते जन्मिएका सविन न्यौपाने हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्वर १ का निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन् । २०५९ सालेदेखि पत्रकारितामा लागेका उनी राजनीतिमा खुल्लारुपमा २०७३ सालमा प्रवेश गरेका हुन् । पत्रकारितामा समेत उनी अब्बल मानिएका थिए ।
२०७४ साल बैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावबाट हेटौंडा–१ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित न्यौपानेसंग समसामयिक विषयमा नवयुग डटकमका लागि मानवी बानियाँले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।
वडा नम्वर १ लाई समृद्ध बनाउन के के योजनाहरु सफल भए?
पत्रकारितामै तपाईँलाई राम्रो थियो नि, किन राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो?
यस वडा वासीलाई घर—घरमा सिंहदरबार आएको महशुस गराउन सक्नु भएको छ त ?
यसमा हाम्रो पहल कदमी छ । हामी स्थानीय तहका सरकार भईसकेपछि सिंहदरबार घर—घरमा भनिने जुन नारा दिएको छ त्यो एकदम राम्रो पक्ष होे । त्यसको सबैभन्दा ठूलोपाटो सिंहदरबार गाँउमा आउने हो भने हिजोको सामान्य खालको विकास निमार्णको काम वडा तहबाट हुने तर अलि ठुलो विकास बजेटको काम माग्न जानुपर्याे भने, कमिज सरुवाल टोपि लगाएर सिंहदरबारनै छिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो त्यसबाट अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा थियो ।
अब बजेटको हिसाबले ठूलो बजेटको भोल्युम स्थानीय तहको सरकारमा आउँछन् भन्ने त्यो बुझाई संघीयताको भावना र धारणा पनि हो । तर हिजो एकता राज्यात्मक प्रणाली थियो । हो त्यसको संरचना अन्तर्गत् त परिवर्तन भयो हिजो जुन कमिज सरुवाल लगाएर सिंहदरबार जाने परिपाटी थियो त्यो हालसम्म पनि अन्त्य गर्न नखोजिरहेका अवस्था अहिले पनि छ । हामीले साँच्चै भन्नुपर्दा सिंहदरबारको महशुस गराउन सकेका छैनौं । । अहिले यस वडाको ग्रामीण भेगकै विकास निर्माणको कुरा गर्दा एक अर्ब बजेट लाग्ने अवस्था छ, तर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकै वार्षिक बजेट करिब एक अर्ब २२ करोड जति छ । हाम्रो वडालाई वार्षिक बजेट एक करोड १५ लाख, त्यो पनि नगरस्तरीय योजना नभैकन । अनि कसरी जनतालाई महशुस गराउन सक्छौँ ?
वडामा भएका महिला तथा बेरोजगार युवाहरुको लागि के —कस्ता काम हुदैछ त?
धार्मिक पर्यटकीय स्थल, पाथिभरा मन्दिर पनि यसै वडामा पर्छ । वडाबाट यस मन्दिरको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ?
तपाई वडा अध्यक्ष भएको हैसियतले यहाँको वडा बासीलाई यस अवधिभर के दिने योजना छ?